Xukun dil ah oo lagu riday nin ka tirsanaa Daacish. – Banaadir Times
Xukun dil ah oo lagu riday nin ka tirsanaa Daacish.
By banaadir 12th March 2020 177
Maxkamadda darajada 1aad ee Ciidanka Qalabka sida ayaa xukun dil ah ku ridday Nin lagu eedeeyayin uu horay u dilay Askari ka tirsanaa Ilaalada Degaanka Xamar ee Gobolka Banaadir.
Maxamed Cali Maxamed Faarax oo ku dhashay Kismaayo ayaa lagu eedeeyay in uu ka tirsanyahay Ururka Daacish sidoo kalena dilay Maxamuud Cabdi Dhuxulow oo uu Bishii August 2019kii ku dilay Suuqa Siinaay ee Degmada Warta Nabadda.
Ninkan ayaa la sheegay in Ururka Daacish uu uga biiray Buuraleyda Galgala ee Puntland halkaas oo ay ka dagaallamaan Daacish faraceeda Soomaaliya.
Qareennada u doodayay Maxkamadda iyo qiraalka eedeysanaha ayaa waxaa Guddoomiyaha Maxkamadda darajada 1aad ee Ciidanka Qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ku dhawaaqay in Maxamed lagu xukumay dil toogasho ah.
Kolnay Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay Maxamed Cali Maxamed Faarax uu khirtay dhamaan eedama loo jeediyay,haatana loo xukumay dilka Marxuum Maxamuud Cabdi Dhuxulow oo ka tirsinaa Ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Guddoomiyaha Maxkamadda darajada 1aad ee Ciidanka Qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sidoo kale sheegay in uu eedaysanaha u furanyahay racfaan.
Trump oo Xiyiraad dhanka Socdaalka ah ku soo rogay wadamada reer Yurub.
By banaadir 13th January 2020
Ciidamada dowladda oo la wareegay degaano dhowr ah
By banaadir 3rd February 2021
Maamulka Gobolka Banaadir oo Amaro kusoo rogay Hay’adaha ka howlgalla Muqdisho
By banaadir 30th December 2020